18 | October | 2014 | Danya Wadi
သန္ဓေတားဆေးများကရာသီလာခြင်းကို အဆုံးသတ်စေနိုင် သလား ? ? ?
By danyawadi October 18, 2014 Leaveacomment
Sat, 2014-10-18 06:47 ရာသီလာခြင်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်း၏ ကျန်း မာသော သာမန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးရာသီစလာခြင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်မှ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်စဆောင်ရန် ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ် အမျိုးသမီးများစွာမှာ ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရွေးချယ်လာကြသည်။ စာရှုသူတစ်ဦး ထဲမှ များမကြာမီက အောက်ပါမေးခွန်းကို လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။ လေးစားရပါသော ဒေါက်တာမန်နီရှင့် ကျွန်မလစဉ် ရာသီလာတာကို တားဆီးဖို့ သိပ်မကြာမီက သန္ဓေတားဆေးတွေ အဆက်မပြတ် စသောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်မီ အချိန်ထိ (ဒါမှ မဟုတ်) ကျွန်မရာသီလာတာကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တားထားဖို့ သန္ဓေတားဆေးတွေ သောက်တာအန္တရာယ်ကင်းပါသလားရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လိုရီ […]
အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ၁၃ နှစ်သား ပါလက်စတိုင်း ကလေး တစ်ဦး အား အစ္စရေး စစ်တပ် ပစ်သတ်
အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄ M-Media – အစ္စရေးက ပိတ်ဆို့ထားသော ပါလက်စတိုင်းပိုင် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင် အစ္စရေးစစ်သားများမှာ ပါလက်စတိုင်း လူငယ်တစ်ဦးအား ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေသတွင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်း များက ပြောကြားခဲ့သည်။ သေဆုံးသွားသူမှာ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ဘဟာ ဘာဒါဆိုသူဖြစ်ပြီး အစ္စရေးက ကာရံထားသည့် နံရံအနီး ဘီအစ်လစ်က်ယာရွာသို့ ၀င်ရောက်စဉ် ယမန်နေ့က ပစ်သတ်ခံခဲ့ ရခြင်း ဖြစ် သည်။ အဆိုပါရွာတွင် ပါလက်စတိုင်းလူငယ်များမှာ အစ္စရေး စစ်တပ်အား ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့သည့်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိုပစ်ပေါက်မှုတွင် ဘာဒါ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုမူ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပေ။ ရာမာလာဆေးရုံမှ ဒါရိုက်တာ အဟ်မဒ် ဘီတာဝေကမူ ဘာဒါမှာ ရင်ဘတ်တွင် […]
October 18, 2014 by admin — Burma Times: 19 Oct 2014 PHUKET: Perhaps the clearest and most thorough description of the trafficking of Rohingya and others through Thailand was released yesterday ataconference in Kuala Lumpur run by the London-based Equal Rights Trust and the Institute for Human Rights and Peace Studies Mahidol University, […]
၈၈ ရဲ့တိုင်းဆူ ပြည်ဖျက်များကို ဖော် ထုတ်ခြင်း အပိုင်း(၄)
နေမင်း| October 17, 2014 စာရေးသူသည် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် အထင်အရှား ပေါ်ပေါက်လာသော သပိတ်ဦးစီး ကော်မတီများ၊ ကျောင်းသား အဖွဲ့များထံ ချဉ်းကပ်၍ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင် သတင်းကို အကူအညီ ရယူနိုင်ရန် ချဉ်းကပ်ခဲ့ သော်လည်း အဆိုပါ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် များသည် လမ်းပေါ်ချီတက်ပွဲ၊ စင်တင် တရားပွဲများ ကိုသာ စိတ်ဝင်စား ကြပြီး တချို့သော သပိတ်ခေါင်းဆောင် များ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆိုသူများမှာလည်း မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့စရိုက် အတိုင်း မင်းလောင်းမျှော် ဝါဒသမားများက ဝိုင်းဝိုင်းလည် ခြံရံထားသဖြင့် ၎င်းတို့ အနီးသို့ စာရေးသူကပ် ၍ သတင်း မယူနိုင်၊ သတင်း မပေးနိုင်၊ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီတောင်း၍ […]
မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် စက်နှင့်ပျံသန်းယာဉ် ဌာနမှ ကျောင်းသားရှစ်ယောက်နှင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော DAWN SWAZ အမည်ပေးထားသည့် Radio Control သုံးလေယာဉ် အား(၁၂.၁၀၂၀၁၃) နေ့ မနက် ၇း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်တည်ဆောက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ် သည့် ကိုစွမ်းထက်မှ ရိုးရာလေးကို အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်မှ ငါးနှစ်တာ သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ သီအိုရီများကို အခြေခံပြီး လက်တွေ့ အသုံးချဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရယ် ၊ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းများတွက်ချက် ပြီး လေကြောင်း ဆိုင်ရာ နည်း ပညာများ တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရယ် နောက်ပြီးတော့ အခုတည်ဆောက်ထားတဲ့လေယာဉ်ကို အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများမှာ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ကြိုးစား တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကိုဝေယံစိုးမှ ဆက်လက်ရှင်းပြရာ […]
Wednesday, October 15, 2014 ဆော်ဒီအာရေးဗျ နိုင်ငံမြို့တော် ရိယတ်မှာ သေနတ်သမား တဦးက မနေ့တုန်းက သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့ရာမှာ အမေရိကန်တဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ မြို့တော် ရီယတ်၊ ဓာတ်ပုံ- ဂါးဒီးယန်း အမေရိကန် နိုင်ငံသား ၂ ဦးဟာ ဆော်ဒီအာရေဗျမြို့တော် ရီယတ်ရဲ့ ကားဓာတ်ဆီဖြည့်တဲ့ ဆိုင်တခုမှာ ကားရပ်ထား နေစဉ်မှာပဲ မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားတဲ့ ဆော်ဒီလူမျိုးသေနတ်သမားက ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန် တဦးသေဆုံးကာ တဦး ဒဏ်ရာရှိသွားပါတယ်။ အနီးမှာရှိတဲ့ ဆော်ဒီရဲက သေနတ်သမားကို ပစ်ခတ်ကာ ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။ သေနတ်သမားကတော့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ ဆော်ဒီပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ အခုလို သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ […]
လာမည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများသို့ ရေနံ လုပ်ကွက် ၁၅ ခု မြန်မာ အစိုးရ ချပေး မည်
အောက်တိုဘာ ၁၇ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်များအား နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနေသော မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရေနံရှာဖွေရေး လုပ်ကွက် ၁၅ ခုအတွက်လည်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန်အထိ ရေနံနှင့် သဘ၀ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်ပေါင်း ၄၀ ခန့်ကို နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။ ထိုပမာဏမှာ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေနံနှင့် သဘာဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်အရေအတွက်၏ ထက်ဝက်ခန့်ဖြစ်ပြီး Total နှင့် Shell တို့ကဲ့သို့ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီများက ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ရေနံလုပ်ကွက်များ ချပေးရန် လျာထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း […]